Xeer Ilaaliyaha Guud ee Spain oo ku baaqay in Samuel Eto’o lagu xukumo 10 Sanadood oo xarig ah! – Gool FM
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Spain oo ku baaqay in Samuel Eto’o lagu xukumo 10 Sanadood oo xarig ah!
Haaruun November 24, 2016
(Madrid), 24 Nof 2016 –Xeer Ilaaliyaha Guud ee Spain ayaa dacwad ku soo oogay Weeraryahankii hore ee kooxda Barcelona iyo xulka Cameroon Samuel Eto’o kaddib markii uu soo xareyn waayay canshuuro ku waajibay intii u dhexeysay 2006-2009.
Sida uu qorayo Wargeyska ‘El Pais’ Xeer Ilaaliyaha ayaa ku doodaya in Eto’o uu khiyaameeyay lacag gaareysa 3.8 Milyan oo Euro oo uu waaxda Canshuuraha u soo xareyn waayay xilligii uu Barcelona joogay, waxaana xeer ilaaliyuhu uu soo jeediyay in Eto’o lagu xukumo 10 sanadood oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 14 Milyan oo Euro.
Sida ay sheegeyso Waaxda Canshuuraha Spain, Ciyaaryahan Eto’o iyo Wakiilkiisa José Maria Mesalles ayaa soo xareyn waayay canshuurihii laga bixin lahaa heshiiskii uu laacibka Cameroon kula jiray shirkadda Puma, waxaana Samuel iyo Wakiilkiisu ay xaquuqdii sawirrada laacibka u wareejiyeen laba shirkadood oo kala ah (Bulte) oo Spanish ah iyo (Tradesport) oo Hungary laga leeyahay.
Eto’o oo isagu ahaa qofka keliya ee xuquuqda sawirradiisa lahaa ayaa xeerku ahaa in heshiiska shirkadda Puma uu ka bixiyo canshuur dhan 45% sida ay baarayaashu sheegayaan waxaana markii la xisaabiyay ku soo baxday lacago uu is daba mariyay.
Kiiskan lagu soo oogay Eto’o ayaa markii ugu horreysay waxaa la furay sanadkii 2012, balse dhowr jeer ayuu dib u dhacay maadaama Eto’o iyo Mesalles ay iska fogeynayeen eedeymahan, halka Garyaqaannaduna ku adkeysanayeen in kiiskani la sii ambaqaado.
Aqriso kulamada uu seegi doono Gareth Bale
Jeenyo iyo Heegan oo isku garab dhacay